Douglas Costa oo gaaray xerada tababarka xulka qaranka Brazil isagoo qaba dhaawac, miyay soo idlaatay rajadiisa koobka aduunka? – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo gaaray Rikoodh uusan qofi gaarin… (CR7 wuxuu noqday shaqsigii ugu horreeyay ee …)
Mushaar Intee la eg ayuu Isbuucii ka qaadan doonaa Bruno Fernandes kooxda Manchester United?
Deg-Deg: Kooxda Manchester United oo ku dhawaaqday saxiixa Bruno Fernandes
Kooxaha Horseed Iyo Dekedda oo dhibcaha ku qeybsaday kulan ka tirsanaa horyaalka Somali Premier League
RASMI: Kooxda Arsenal oo sameysay saxiixeeda ugu horreeyay ee bisha Janaayo
Qaar ka mid ah dhallinyarada Magaalada Muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka caawa ee Manchester Derby
Waxqabadka Neymar Jr ee Kooxda Paris Saint-Germain oo ka wanaagsan kiisii Barcelona… (Rikoorradan ayaa kuu caddeynaya)
Waa kee xiddiga ay markaan mudnaanta koowaad siineyso Manchester United?
Kaddib Frenkie de Jong Barcelona oo xiddig kale ka dooneysa kooxda Ajax
Bruno Fernandes oo isagoo dhoolla-caddeynaya u soo duulay Magaalada Manchester si uu tijaabada caafimaad ugu maro Man United
Douglas Costa oo gaaray xerada tababarka xulka qaranka Brazil isagoo qaba dhaawac, miyay soo idlaatay rajadiisa koobka aduunka?
Dajiye May 23, 2018
(Brazil) 23 Maajo 2018. Sida daboolka ay ka qaaday saxaafada xidiga kooxda Juventus ee Douglas Costa ayaa maanta gaaray xerada tababarka xulka qaranka Brazil isagoo qaba dhaawac.
Xidiga ka ciyaara garabka bixidix ee weerarka ayuu dhaawac kasoo gaaray dhanka bowdada, laakiin halis kuma ahan ka qeyb galkiisa koobka adoonka ee 2018 ka dhici doono dalka Russia.
Rodrigo Lasmar oo ka hadlay xaalada dhaawac ee Douglas Costa ayaa wuxuu yiri: “Wuu yimid laakiin wuxuu ka sheeganayaa xanuun dhanka bowdada ah”.
“Waxaan sameenay baaritaano, nasiib wanaag waxaan helnay dhaawac yar, sidaas darteed si gooni ah ayuu u qaadan doonaa tababarka, wuxuu seegi doonaa kulanka koowaad, laakiin ma fileyno inuu halis ugu jiro inuu ka maqnaado Koobka Aduunka”.
Si kastaba 27 jirkan reer Brazil ayaa wuxuu xili ciyaadkan kaga soo muuqday kooxda reer talyaani ee Juventus 47 kulan ee ah dhamaan tartamada kala duwan, wuxuu dhaliyay 6 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 14 gool kale.
Agaasimaha Arsenal Ivan Gazidis oo ka warbixiyay waxyaabaha ay ku doorteen in ay shaqaaleysiiyaan Unai Emery
Manchester City oo qarka u saaran inay la soo wareegto Riyad Mahrez… (Goormee la soo gabagabaynaa heshiiska?)